I-Samsung Galaxy Tab, siyayivavanya kwaye sinike uluvo lwethu | I-Androidsis
antocara | | Ezinye izixhobo, Reviews
Emva kokuba I-Samsung Galaxy Tab engenabhokisi ukuba sikushiye kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, lithuba lakho ngoku emva kokuvavanya i-terminal kangangeentsuku ezimbalwa ngoku, ukunika uluvo ngokubonakala kwethu ngayo. Ukukwazi ukuvavanya i-Galaxy Tab kuye kwabakho yeyiphi, kwivenkile yefowuni ephathekayo ekwi-Intanethi apho ungayifumana khona ngexabiso elinomdla kakhulu kwaye simahla kwiikhampani ezifowuna.
Andizukuya kakhulu kwiinkcukacha zobuchwephesha ze "tablet" kuba besikhankanye amaxesha amaninzi kwaye apha Ungazibona ngononophelo. Eyona nto ibalulekileyo ekufuneka uyiqwalasele yeyakho Iscreen se-7-intshi esisebenza ngesisombululo seepikseli eziyi-1024 × 600, un Iprosesa yeCortex A8 ngesantya se-1 Ghz kunye neqabane layo iPowerVR SGX540. Inekhamera yangemva eyi-3 Mpx kunye nekhamera engaphambili eyi-1,3 Mpx.
El Samsung Galaxy Tab Sisilingo sokuqala esibi sokukhuphisana ne-Apple iPad edumileyo kwaye nangona i-terminal izalisekisa injongo yayo ngaphezulu ngokwaneleyo, ndicinga ukuba kufanelekile ukuqonda ukuba isenendlela ende yokuhamba ukuze ikwazi ukuthelekisa i-iPad. Nangona sizithelekisile ezi zixhobo zimbini, ndicinga ukuba ngamacandelo amabini ahlukeneyo amacwecwe kwaye enzelwe ukusetyenziswa okwahlukileyo. Ndingalinganisa i Galaxy Tab njengedayari ye-elektroniki enobuchule bemultimedia, kucetyiswa kakhulu kwabo bafuna amandla eSmartphone ngoncedo lokuba nee-intshi ezisi-7 ukujonga, ukukhohlisa nokwenza iofisi ezenzekelayo okanye amaxwebhu afanayo. Ukongeza koku, kunjalo, inako ukudlala phantse nayiphi na ifomathi yemultimedia kunye nesakhono sokwenza ukhangelo lwewebhu lube lula ngakumbi kuneefowuni ezi-3,5-intshi okanye ezifanayo.
UGoogle sele ephawule izihlandlo ezininzi ukuba inguqulelo yangoku ye-Android eyaziwa ngokuba yiFroyo ayisiyiyo eyona icetyiswayo kolu hlobo lwesixhobo kwaye iyabonisa. Ukuqala, uninzi lwezicelo azenzelwanga ukusetyenziswa kwizikrini ezinkulu kunezo zomnxeba kwaye nangona sisazi ukuba kunjalo Inokwandiswa ngezixhobo ezithile ezivela kwiNtengiso ye-Android, okwenziweyo kukuba, wandise umfanekiso.
Ukukhangela kwiwebhu, nangona kulungile, kunokuphuculwa kakhulu. Zombini iscroll kunye nesenzo sokusondeza ngesenzo esiqhelekileyo seminwe emibini senziwa ngokukhubeka kwaye hayi ngendlela egudileyo okanye ekhawulezayo. Kuyinyani ukuba konke oku kungaphuculwa kwaye kulindeleke ukuba kuphuculwe ngokufika kweGingerbread kunye neHoneycomb.
Kungenzeka ukuba isimo sengqondo sezinye iinkampani sikulibazisa ukuphuma kweetheminali zazo xa kukho uhlobo olwaneleyo lwenkqubo yokusebenza yeyona ichanekileyo. Isamsung isenokuba ifuna ukuthatha ithuba lokuba yeyokuqala ukumilisela ezi mpawu zisazi ukuba ayicetyiswanga.
Masithi into entle malunga nayo Galaxy Tab kwaye inendawo yokuxhasa ubungakanani bayo. Ilawulwa kakhulu kwaye iyanyamezeleka kwaye nangona ithiyori inokuthi ilingane kwibhulukhwe okanye kwipokotho yebhatyi, ekusebenzeni kunzima kancinci. Ithebhu iya kuqhutywa njengazo zonke iiterminal kwisutikheyisi, ibhegi, njl.
Yonke into ephathelene nokuzala kwemultimedia yenziwa ngaphandle kweengxaki, ukuveliswa kwakhona kwe-intanethi okanye iividiyo ezigciniweyo akuthethi nakuphi na ukuphazamiseka kwesi sixhobo nayo yonke into enxulumene nomculo. Ngokufanayo, impendulo yesikrini ilungile kodwa njengoko sisitsho Iinguqulelo zamva ze-Android ithiyori kufuneka iphucule into ukusukela ngoku Isiphelo sendlela sinee-sensors zeMaxtouch efanayo neGalaxy S kunye nendlela eziqhuba kakuhle ngayo.
Njengoko i-GPS iyamangalisa kwaye enkosi kubungakanani bayo obuncinci kuneepilisi ozisebenzisayo, kulula ukuyincamathisela kwiideshibhodi zezithuthi kwaye ngokuqinisekileyo uGoogle Maps Navigation usebenza njengekhubalo.
Ukufakwa kwekhamera yokufota kunye nekhamera engaphambili ehambelanayo yokwenza iifowuni zevidiyo ndiyibona iphumelele, ayisiyonto esemgangathweni kodwa kukusetyenziselwa oko kwenzelwe oko kwanele.
Njengoko sisazi, enye yezinto ezahlula kakhulu le thebhulethi kwezinye ezikhoyo kwintengiso kukudityaniswa konxibelelwano lwe3G kunye nokukwazi ukwenza iifowuni. Njengoko benditshilo ekuqaleni, ukuba esi sigxina sisetyenziswe ngaphakathi kwishishini okanye kwindawo eneshishini, ukusetyenziswa kweefowuni ezingafakwanga izandla kungayifumana indawo yakho nanini na xa sikwiiofisi. Andinakucinga ukuba nabani na uthetha okanye atsalele umnxeba kwesi sigxina esihla ngesitrato, kwakhona ukubala ukuba ayisiyonto ithatha indawo ye-smartphone esiya kuthi ngokuqinisekileyo siyithwale ngelixa sisebenzisa i-Galaxy Tab. Ngaba kuyimpumelelo ukuyifaka? Ukuba sine-Smartphone, andikuboni ukusetyenziswa konxibelelwano olongezelelekileyo lwe-3G kwithebhulethi, ukubanakho ukwenza imfonomfono kwifowuni efanayo.
Njengomfundi wencwadi ye-elektroniki, kuyacaca ukuba ifaneleke ngakumbi kuneetheminali ezineescreen ezinkulu, zombini ngenxa yobunzima bayo obuphantsi xa kusiziwa ekubambeni emoyeni nangenxa yokukhululeka kwayo ngakumbi kwezothutho.
Ukuqukumbela, ndicinga ukuba Galaxy Tab Luhlobo lwesiphelo sendlela phakathi kwefowuni kunye neetafile, ngenxa yenguqulo yenkqubo yokusebenza ephetheyo, ikufutshane nefowuni kunethebhulethi. Xa ufumana uhlaziyo kwiinguqulelo eziphezulu ze-Android ngokuqinisekileyo uya kufumana amanani apheleleyo. Njengendawo yokudibanisa, ubungakanani bayo obuncinci benza ukuba kube lula ukuthwala kwaye kube lula ukuhambisa.
Njengoko ndihlala ndisitsho, ngaphambi kokuthenga zibuze ukuba yeyiphi into ofuna ukuyinika i-terminal kwaye emva koko ubuze ukuba ingaba uzimisele ukwenza ntoni ngesixhobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ezinye izixhobo » I-Samsung Galaxy Tab, sayivavanya kwaye sanika uluvo lwethu
UYesu Rodriguez sitsho
Uphononongo olugqwesileyo! Ukuqwalaselwa kwento kuyancomeka, kuthintela ukuba nenzondelelo yempambano!
Phendula kuYesu Rodriguez
UJavier Cantos sitsho
Into oyibonisayo kumhlathi wokugqibela ibonakala ibalulekile kum, into yokuqala ekufuneka uyenzile kukuthathela ingqalelo amanyathelo ofuna ukuwenza, kwaye ukusuka apho uqaphele ukuba zeziphi izixhobo ezifanelekileyo. Oku kuthetha ukuba siyazibona iimfuno esifuna ukuzigubungela, hayi ngenye indlela, asizukujonga izizathu zokusebenzisa isixhobo.
Phendula kuJavier Cantos
Uhlalutyo olugqwesileyo !!, Ndiyakholelwa ngokunyanisekileyo ukuba yenye yeebhloko ezintle ze-android, andiphoswa naziphi na iindaba zakho your Ndiyakuthanda ukuba unenjongo 🙂
Izimvo ezigqwesileyo !! ngqo kunye nenjongo
Uphengululo olulungileyo, ucacise yonke into ...
Kuya kuba kuhle ukuba une-unboxing kwaye uphonononge ii-archos 7 okanye 10 .. ngexabiso elihle kakhulu, kwaye ngayo, inomdla kakhulu ...
Kube luncedo kakhulu ukwazi ukusikelwa umda ngoku, kwinto endiyibonayo kuya kufuneka silinde ingxelo entsha kaGoogle.
z4root, fumana ukufikelela kweengcambu kwisiphelo sakho se-Android ngonqakrazo olulula